UNGAYITHENGA PHI KWAYE UYITHENGA PHI ISOLARWIND TOKEN (SLW) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Ungayithenga phi kwaye uyithenga phi iSolarWind Token (SLW) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Urhwebo SLW
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-SLW ngokukhuselekileyo kwii-wallet zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lwe-SLW
I-SolarWind Token ibonelela ngendlela esasazwayo kubantu ukuba bafumane inkxaso-mali kwiiprojekthi zelanga. Ngokusebenzisa i-dApp yethu, inkqubo epheleleyo yokuxhasa ngemali iprojekthi ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni yi-100% enokulandeleka kwi-Binance blockchain. Sinesikhwama sengxowa-mali esizinikeleyo esiya kuthi sisetyenziselwe ukuhlawula isifakeli selanga sokhetho lomthengi. Zonke izinto ezifakiweyo ezintsha ziya kucelwa ukuba zenze isipaji kwaye zidweliswe ngegama lenkampani kwiwebhusayithi yethu. Imali iya kuhlawulwa kwi-installer ngokweeprojekthi ezibalulekileyo. Ukugqitywa kweprojekthi, umthengi uya kuba nakho ukwenza iintlawulo ngokuthe ngqo kwi-echibini elinamatyala kunye nekhadi lokuthenga ngetyala nge-DApp yethu. I-dApp ikwanokudityaniswa kumachibi amatsha kunye nabakhoyo asezimbonweni eBitcoin ukubanika ufakelo lwelanga ukukhawulezisa utshintsho lweBitcoin kumandla ahlaziyekayo. Oku kuyakwenza indlela yokubhatala ezenzekelayo yabasebenzi mgodini kunye nokwenza ichibi lokuhlawula amatyala elixhaswe yiBitcoin nge $ SLW.
Sikwakuqonda ukubaluleka kokubuyisela kuluntu kwihlabathi liphela. Kwi-Q3 2021 sizakube sisungula eyethu engenzi nzuzo, i-Positive Energy. I-5% yeemali ezithunyelwe kubafaki ziya kwabelwa isipaji sothando ukuzalisekisa imisebenzi kwihlabathi liphela evotelwe luluntu. Imishini enjalo iya kubandakanya izihloko ezahlukeneyo ezinje ngamandla, impilo, indlala, ukungabi namakhaya, okanye nangaphezulu.
Njengotshintsho lwehlabathi kumandla ahlaziyekayo, abaninimzi, amashishini kunye noorhulumente bafuna ukutshintsha basebenzise amandla elanga. Izigidi zabaqhubi kulindeleke ukuba zitshintshele kwizithuthi zombane, kwaye abasebenzi basezimayini beBitcoin bafuna imithombo yamandla acocekileyo. Le yindlela yokuhluma okubonakalayo kumzi mveliso welanga onentengiso kuphela kwizigidi zezigidi, xa kuthelekiswa necandelo lezamandla leetriliyoni ezininzi. Zininzi iinkqubo zokunceda ukukhuthaza abaninimzi namashishini; Nangona kunjalo, kunzima kubantu abaninzi ukuhlawulela ufakelo ngemali okanye nokufumana inkxaso-mali yokuxhasa iprojekthi.
ISolarWind sisisombululo. Lo mqondiso ubonelela ngendlela entsha kraca yabantu yokutyala imali kumzi mveliso welanga, unika abathengi kunye nabafakeli imali ngokulula, ukukhawulezisa utshintsho lweBitcoin kumandla ahlaziyekayo, kwaye kunceda oorhulumente ngeenjongo zabo ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni. Abanini banethuba lokukhula ngomqondiso ngeendlela ezine ezahlukeneyo:
Ukwabiwa kwakhona kweepesenti ezi-5 kuvumela abanini ukuba baqokelele amathokheni amaninzi ixesha elide ababambe ngalo kwintengiselwano enye yethokheni.
Indawo yokuhlawula amatyala iya kunyuka emva kokugqitywa kweprojekthi kuba abathengi begqibezela iintlawulo zabo, imali engaphezulu iya kubuyiselwa echibini kunangaphambili. Oku kongeza uhlobo lwesiko lotyalo-mali kuba abanini banokuthi ngokungathanga ngqo bafumane inzala ngokusebenzisa ichibi lokuhlawula amatyala.
Amandla ahlaziyiweyo xa ewonke asadlala indima encinci kwicandelo lezamandla lilonke. Lo mqondiso uvumela abanini ukuba bathathe inxaxheba ekukhuleni okubonakalayo okuza kuza kumzi mveliso ohlaziyekayo.
Ukuzama ukusombulula ukuxhomekeka kwamandla eBitcoin kwizibonelelo ezingafumanekiyo kuya kuvumela i-Bitcoin kuphela ukuba ikhule ngexabiso, kodwa kwimarike ye-cryptocurrency yonke.
Ixabiso langoku le-SLW yi- $ 0.00 kwaye ibekwe kwi-3507 kwi-Coinmarketcap.
I-SLW idweliswe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuthenga kuqala i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-SLW .
zisebenza kwisiguquli selizwi esisebenzayo simahla
Ukuba yenye yezona ndawo zidumileyo neziluncedo zokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto, i-UpHold inezi zinto zilandelayo:
I-USDT, yenye yezona ndawo zithandwayo zixhaswa zi-USD (ngokusisiseko i-crypto exhaswa yimali eyi-fiat yokwenene ukuze ingabi bhetyebhetye kwaye inokunyangwa phantse njengokuba imali ye-fiat ikhonkxiwe nayo) iyafumaneka, oku kulula ngakumbi ukuba I-altcoin oceba ukuyithenga inee-USDT kuphela zokurhweba ngababini kutshintshiselwano lwe-altcoin ke akufuneki udlule kolunye uguqulo lwemali ngelixa uthenga i-altcoin.
umlambo nba simahla kwi-reddit
Kodwa asikenzi okwangoku. Sifuna ukuguqula i-BTC yethu ibe yi-SLW. Njengoko i-SLW idwelisiwe ngoku kwiPancakeSwap siza kukukhokela ngendlela yokuguqula i-BTC yakho eqongeni. Ngokungafaniyo nolunye utshintsho lwendawo enye amanyathelo okuguqula aya kwahluka kancinci kwiPancakeSwap kuba lutshintsho olusemthethweni (i-DEX) engafuni ukuba ubhalise iakhawunti kwaye ungahambi kuyo nayiphi na inkqubo ye-KYC, nangona kunjalo, ukurhweba kwi-DEX kufuna ukuba ulawule Isitshixo sakho sangasese kwisipaji sakho se-altcoin kwaye kuyacetyiswa ukuba ukhathalele isitshixo sakho ngasese, kuba ukuba ulahle izitshixo zakho, oko kuthetha ukuba uyakulahlekelwa kukufikelela kwiingqekembe zakho ngonaphakade kwaye akukho nkxaso yabathengi iya kukunceda ufumane izinto zakho umva. Nangona ilawulwa ngokufanelekileyo kukhuselekile ngakumbi ukugcina iiasethi zakho kwisipaji sakho sangasese kunakwizipaji zotshintshiselwano. Ukuba awukonwabisi ukusebenzisa i-DEX okwangoku, jonga ukuba ngaba i-SLW iyafumaneka nakuluphi na olunye unaniselwano lwendawo yesiqhelo kwithebhu engentla. Ngaphandle koko masilandele la manyathelo ngononophelo.
Guqula i-BTC yakho kwi-BNB kwi-Binance
I-PancakeSwap yi-DEX efanayo ne-Uniswap / Sushiswap, kodwa endaweni yoko iyaqhuba kwi-Binance Smart Chain (BSC), apho uya kuba nakho ukuthengisa zonke iithokheni ze-BEP-20 (ngokuchasene ne-ERC-20 tokens in the Ethereum blockchain), ngokungafaniyo ne-Ethereum, inciphisa kakhulu intlawulo (igesi) yokurhweba ngelixa urhweba eqongeni kwaye ufumana ukuthandwa kutshanje. I-PancakeSwap yakhelwe kwinkqubo yemakethi ezenzekelayo (i-AMM) exhomekeke kumachibi okufumana imali ahlawulwa ngumsebenzisi kwaye yiyo loo nto inokusebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle kwencwadi yoku-odola yendabuko evela kutshintshiselwano lwendawo enye.
Ngamafutshane, njengoko i-SLW ingumqondiso we-BEP-20 osebenza kwi-Binance Smart Chain, indlela ekhawulezayo yokuyithenga kukudlulisa i-BTC yakho kwi-Binance (okanye iintengiselwano ezidweliswe kwitafile engezantsi kubathengisi base-US), uyiguqulele kwi-BNB, emva koko yithumele kwisipaji sakho ngeBinance Smart Chain kwaye utshintshe iBNB yakho yeSLW kwiPancakeSwap.
Abarhwebi baseMelika kufuneka bakuthathele ingqalelo ukubhalisela ukutshintsha okungaphantsi.
Bhalisa kwiSango.io Bhalisa i-BitMart Bhalisa i-MXC
Nje ukuba ubhalise kwi-Binance okanye ukutshintshiselana okucetyisiweyo apha ngasentla, yiya kwiphepha lesipaji kwaye ukhethe i-BTC kwaye ucofe idiphozithi. Khuphela idilesi ye-BTC kwaye ubuyele kwi-Coinbase, rhoxisa i-BTC yakho kule dilesi kwaye uyilinde ukuba ifike, oku kuya kuthatha imizuzu engama-15 ukuya kwengama-30 ngokuxhomekeke ekusetyenzisweni kwenethiwekhi ye-BTC. Ukufika kwe-BTC yakho kwi-Binance Coin (BNB)
Dlulisa i-BNB kwisipaji sakho
Apha kuza elona candelo linzima lenkqubo, ngoku kufuneka wenze isipaji sakho ukuze ubambe zombini i-BNB kunye ne-SLW, kukho iindlela ezininzi onokuzenzela isipaji sakho, olona khetho lulungileyo kukusebenzisa isipaji sehardware, njengeLedger Nano S okanye ULedger Nano X. Zizixhobo ezikhuselekileyo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iiasethi zakho, kuya kufuneka ugcine amabinzana embewu kwindawo ekhuselekileyo kwaye ungaze uyibeke kwi-intanethi (okt sukufaka amabinzana embewu kuyo nayiphi na inkonzo / ilifu / imeyile, kwaye musa ukuyifota). Ukuba ucwangcisa ukuhlala kwindawo ye-crypto okwethutyana, kuyacetyiswa ukuba ufumane isipaji sehardware.
Ngenye indlela unokwenza isipaji sakho, apha siza kusebenzisa iMetaMask njengomzekelo ukubonisa indlela yokuseka isipaji sakho.
Yongeza ulwandiso lweMetaMask kwiChannel
Sincoma ukusebenzisa iGoogle Chrome okanye iBrawuza enesibindi apha. Yiya kwiVenkile yeWebhu ye-Chrome kwaye ukhangele iMetaMask, qiniseka ukuba ulwandiso lwenziwa ngu-https: //metamask.io ngokhuseleko kwaye emva koko ucofe u-Yongeza kwi-Chrome.
Qhubeka ngo 'Qalisa' kwaye emva koko ucofe ku 'yenza isipaji' kwiscreen esilandelayo, funda yonke imiyalelo kwiscreen esilandelayo kwaye ucofe u-'Vuma '
Emva koko khetha igama eligqithisiweyo elikhuselekileyo lokukhusela isipaji sakho seMetaMask, eli gama lokugqitha ayililo iqhosha lakho labucala okanye amabinzana embewu, ufuna kuphela eli gama lokungena ukufikelela kuLwandiso lweChannel.
Nali inyathelo lokuvelisa ibinzana elilalela, kwiscreen uza kubona uluhlu lwamagama angaqhelekanga emva kokucofa 'ukuveza amagama ayimfihlo', ubhale la magama phantsi ephepheni kwaye ungaze uwagcine kwi-Intanethi, naphina. Ukufumana ukhuseleko olongezelelekileyo unokucinga ngokufumana i-Cryptosteel Capsule eLedger ukugcina amabinzana akho ngokukhuselekileyo nangokwasemzimbeni.
Nje ukuba ugcine amabinzana embewu ngokukhuselekileyo, qinisekisa kwiscreen esilandelayo ngokuziqinisekisa. Kwaye ugqibile! Funda iingcebiso kwakhona ukuqinisekisa ukuba uyazi ngokupheleleyo imiba yezokhuseleko kwaye ucofe konke okwenziweyo, ngoku isipaji sakho silungile. Ngoku nqakraza kwi MetaMask icon kwibar yolwandiso kwisikhangeli kwaye uvule isipaji sakho ngegama eligqithisiweyo. Kuya kufuneka ubone ibhalansi yakho yokuqala emva koko.
Ngoku ukulungele ukufaka i-BNB yakho kwisipaji sakho, yiya PancakeSwap, cofa u-'Dibanisa 'phezulu kwaye ukhethe iMetaMask.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukunxibelelana neMetaMask kuya kufuneka ubuzwe kwangoko ukuba ungathanda ukongeza inethiwekhi yeBinance Smart Chain kwiMetaMask yakho, nceda uqhubeke neli nyathelo njengoko kubaluleke kakhulu ukuba uqiniseke ukuba uthumela i-BNB yakho ngenethiwekhi elungileyo. Emva kokudibanisa inethiwekhi, tshintshela kwinethiwekhi kwiMetaMask kwaye uya kuba nakho ukubona ibhalansi yakho ye-BNB kwi-Binance Smart Chain. Ngoku khuphela idilesi kwibhodi eqhotyoshwayo ngokunqakraza kwigama leakhawunti.
Ngoku buya ubuye ubuye kwi-Binance okanye nayiphi na into oyithengileyo oyithengileyo i-BNB. Yiya kwisipaji se-BNB kwaye ukhethe ukuKhupha, kwidilesi yomamkeli, uncamathisele eyakho idilesi yesipaji kwaye uqiniseke ukuba yidilesi echanekileyo, emva koko kuthungelwano lothumelo, qiniseka ukuba ukhethe iBinance Smart Chain (BSC) okanye i-BEP20 (BSC)
Cofa ungenise kwaye ulandele amanyathelo okuqinisekisa emva koko. Emva kokurhoxa ngempumelelo i-BNB yakho kufuneka ifike kungekudala kwisipaji sakho. Ngoku ulungele ukuthenga i-SLW ekugqibeleni!
Buyela umva kwiPancakeSwap, khetha uRhwebo> Tshintshisa kwicala lasekhohlo
Kuya kufuneka ubone ujongano olulula apha ngokusisiseko ngamacandelo amabini, ukusuka nokuya, kunye neqhosha elikhulu elithi 'Dibanisa iWallet' okanye utshintshe.
Cofa kwi-Connect Wallet ukuba awukenzi oko. Ngaphandle koko uya kuba nakho ukubona ibhalansi yakho ye-BNB apha ebaleni, ngenisa imali ongathanda ukuyitshintshisa nge-SLW emva koko uye ebaleni, khetha i-SLW kokwehla, isixa esihambelanayo se-SLW kufuneka sivele kwangoko. Qinisekisa kwaye uqhubeke 'nokutshintsha'. Kwiskrini esilandelayo, qinisekisa ukuthengiselana kwakhona ngokunqakraza Qinisekisa ukutshintsha. Ngoku iMetaMask kufuneka ivele kwaye ikubuze ukuba uyafuna na ukuvumela iPancakeSwap ukuba ichithe i-BNB yakho, cofa uQinisekise. Lindela isiqinisekiso sekrini ide ibonise 'ukuThunyelwa okuThunyelweyo', ndiyavuyisana! Ekugqibeleni uthenge i-SLW !! Emva kwethutyana kufuneka ubenakho ukubona ibhalansi ye-SLW yakho kwi-MetaMask Wallet yakho.
indlela yokuthenga i-wax crypto
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba iSLW idweliswe apho iyakutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
I-Binance yindawo yotshintshiselwano eyaziwayo e-cryptocurrency eyaqalwa e-China kodwa emva koko yahambisa ikomkhulu labo kwi-Island-Malta Island e-EU. I-Binance ithandwa kwi-crypto yayo ukuya kwiinkonzo zokutshintshiselana nge-crypto. I-Binance iqhume kwindawo yemania ye-2017 kwaye ukusukela ngoko yaba lutshintsho oluphezulu lwe-crypto emhlabeni. Ngelishwa, iBinance ayivumeli abatyali zimali baseMelika ke sincoma ukuba ubhalise kolunye unaniselwano esilucebisayo kweli phepha.
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-SLW yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokuyigcina ikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Umzobo weenkonzo zoyilo ezincinci
Ndingayithenga iSLW ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-SLW eYurophu?
Ngaba akhona amanye amaqonga okuthenga i-SLW okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-SLW ngemali ezinkozo. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
Funda ngakumbi kwiziseko zeSolarWind Token kunye nexabiso langoku apha.
ukuthenga phi itvk
freeform.com/ isebenze ngonyaka
hlaziya ii-angular ehl
div ecaleni kwelinye
Intellij yokuqalisa kwentwasahlobo
phendula isitayile somkhethi wasekhaya
Yintoni iAkita Inu (AKITA) | Yintoni uphawu luka-Akita Inu | Yintoni uphawu AKITA
Ungayithenga njani kwaye phi indawo yeShibaverse (VERSE) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Dig Dig kwiLinux (i-DNS Lookup)
Ixabisa malini ukuPhucula iApp efana neTinder ngo-2021?
Sebenzisa iPostfix Imephu yezoThutho kunye neMephu ye-Relayhost yokuThunyelwa kwe-imeyile eFlexible
Uyifumana phi kwaye phi indawo yokuthenga i-AMPnet Asset Platform kunye noTshintshiselwano (AAPX) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Ukuqonda ubungakanani beBoxFutter Widget
Yenza itemplate yeBlog yeGatsby
Isixhobo esitsha se-Jailbreak se-iOS sisebenza kwiimodeli ze-iPhone iOS 11 ukuya kwi-iOS 13.5